မွနျမာနိုငျငံက တက်ကသိုလျကြောငျးသားတျောတျော မြားမြား စိတျဝငျစားတဲ့ Global UGRAD Program အတှကျ လြှောကျလှာချေါနပေါပွီ။
ရှေးခယျြခံရရငျ အမရေိကမှာရှိတဲ့ တက်ကသိုလျမှာ Semester တဈခုအတှကျ Full Scholarship နဲ့ သှားတကျရမှာမို့ အကျဆေးတှကေို သသေခြောခြာ အခြိနျပေး ရေးပွီး လြှောကျစခေငျြပါတယျ။
ကမ်ဘာလုံးဆိုငျရာ ဘှဲ့ကွိုနှီးနှောဖလှယျရေးပညာသငျဆု အစီအစဉျဆိုတာ အခှငျ့အလမျးနညျးပါးတဲ့ လူမှုအသိုကျအဝနျးတှကေ ကြောငျးသူ၊ ကြောငျးသားတှကေို အမရေိကနျယဉျကြေးမှုနဲ့ စံတနျဖိုးတှကေိုလလေ့ာရငျး သူတို့ရဲ့ခေါငျးဆောငျမှု အရညျအသှေး၊ ပညာရပျဆိုငျရာကြှမျးကငျြမှုနဲ့ လူမှုရေးလုပျငနျးဆောငျရှကျလိုတဲ့စိတျဓာတျတှေ ပိုမိုအားကောငျးလာစဖေို့အတှကျ အမရေိကနျပွညျထောငျစုရဲ့ တက်ကသိုလျ ဒါမှမဟုတျ ကောလိပျ တဈခုခုမှာ semester တဈခုစာ သှားရောကျ ပညာသငျဖို့ ပံ့ပိုးပေးတဲ့အစီအစဉျဖွဈပါတယျ။
*** လစဉျနထေိုငျစားသောကျစရိတျ စတဲ့ Program နဲ့ ဆိုငျတဲ့ ကုနျကစြရိတျ အကုနျလုံး ကငျးလှတျခှငျ့နဲ့ အမရေိကမှာရှိတဲ့ တက်ကသိုလျတဈခုမှာ Semester တဈခုအတှကျ သှားလလေ့ာနိုငျမယျ့ အခှငျ့အရေးကို ရရှိမှာ ဖွဈပါတယျ။
*** August 1, 2021 တှငျ အသကျ (၁၈) နှဈပွညျ့ထားသူ ဖွဈရပါမယျ။
*** အင်ျဂလိပျစာအရေးအပွော ကြှမျးကငျြသူဖွဈရပါမယျ။
*** မွနျမာနိုငျငံမှာ ဘှဲ့ကွိုအတှကျ တက်ကသိုလျတကျနတေဲ့သူ ဖွဈရပါမယျ။
*** January 2022 တှငျအမရေိကမှာ ကြောငျးသှားတကျနိုငျတဲ့သူ ဖွဈရပါမယျ။
*** Academic Letter of Recommendation
*** Personal Letter of Recommendation (Letter of Recommendation အတှကျ သူတို့ Website က သတျမှတျထားတဲ့ Form ကို Download လုပျပွီး ဖွညျ့ရမှာ ဖွဈပါတယျ)
*** Passport (သို့) မှတျပုံတငျ
*** STEP 1 : အောကျက Link ထဲဝငျပွီး Sign Up လုပျပွီး Acc လုပျပါ။ >>> https://bit.ly/395hFkt <<<
*** STEP2: အကျဆေး(၂) ပုဒျရေးပါ။
*** အကျဆေးမေးခှနျးက (၃) ခုရှိပါတယျ။
Essay 1 ကို မဖွဈမနေ ရေးရမှာဖွဈပါတယျ။
Essay2&3ကတော့ ကိုယျကွိုကျတဲ့ တဈပုဒျရှေးပွီးရေးလို့ရပါတယျ။
STEP3: အကျဆေးတှရေေးပွီးသှားရငျ အကျဆေးရယျ လိုအပျတဲ့စာရှကျစာတမျးတှနေဲ့အတူ ကိုယျ့ရဲ့ Account မှာ လိုအပျတာတှဖွေညျ့ပွီး တငျလိုကျရုံပါပဲ။ အဲ့ဒါပွီးရငျ ပွီးပါပွီ။
Essay 1 : The Global UGRAD Program is for young leaders committed to serving their home communities. Why would you beagreat participant in the Global UGRAD Program? (450-600 Words)
Please answer either Essay2or Essay 3
Essay2: According to Martin Luther King Jr., “The ultimate measure ofaperson is not where they stand in moments of comfort, but where they stand at times of challenge and controversy.” Describeatime when you encounteredaconflict and how you handled it. What strategies did you use to reacharesolution? What values guided your thoughts and actions? (450-600 words)
Essay3: Everyone’s approach to leadership is different. How would you describe your personal leadership style? What values do you consider the most important when leading others? (450-600 Words)
*** Recommendation Letter ကလေ Website အရဆိုရငျ ကိုယျ့ရဲ့ Account မှာပဲ တငျဖို့ ပွောထားတယျ။ U.S. Embassy Rangoon ရဲ့ FB Post မှာတော့ Recommendation Letter ကို Email နဲ့ Embassy ကိုပို့ဖို့ ပွောထားတာတှရေ့တယျ။ အဲ့တော့ Recommendation Letter ကို Email နဲ့ရော Account မှာရော နှဈခုလုံး တငျနိုငျရငျ ပိုစိတျခရြလောကျတယျ)
*** February 28, 2021 (Midnight Eastern Time)
*** January 2022
*** US က Semester တဈခုစာ သှားတကျရမှာဆိုတော့ ၄-၆ လ ကွာနိုငျပါတယျ။
*** Global_UGRADနဲ့ပတျသကျပွီးအသေးစိတျကိုဘယျမှာဖတျလို့ရလဲ အောကျက Link ထဲဝငျပွီး Check လို့ရပါတယျ။ >>> https://bit.ly/2LKVac3 <<<
Source - U.S Embassy Rangoon
Credit – Guide with Mahuyar
မြန်မာနိုင်ငံက တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတော်တော် များများ စိတ်ဝင်စားတဲ့ Global UGRAD Program အတွက် လျှောက်လွှာခေါ်နေပါပြီ။
ရွေးချယ်ခံရရင် အမေရိကမှာရှိတဲ့ တက္ကသိုလ်မှာ Semester တစ်ခုအတွက် Full Scholarship နဲ့ သွားတက်ရမှာမို့ အက်ဆေးတွေက်ို သေသေချာချာ အချိန်ပေး ရေးပြီး လျှောက်စေချင်ပါတယ်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဘွဲ့ကြိုနှီးနှောဖလှယ်ရေးပညာသင်ဆု အစီအစဉ်ဆိုတာ အခွင့်အလမ်းနည်းပါးတဲ့ လူမှုအသိုက်အဝန်းတွေက ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားတွေကို အမေရိကန်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ စံတန်ဖိုးတွေကိုလေ့လာရင်း သူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှု အရည်အသွေး၊ ပညာရပ်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ လူမှုရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေ ပိုမိုအားကောင်းလာစေဖို့အတွက် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ တက္ကသိုလ် ဒါမှမဟုတ် ကောလိပ် တစ်ခုခုမှာ semester တစ်ခုစာ သွားရောက် ပညာသင်ဖို့ ပံ့ပိုးပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။
*** လစဉ်နေထိုင်စားသောက်စရိတ် စတဲ့ Program နဲ့ ဆိုင်တဲ့ ကုန်ကျစရိတ် အကုန်လုံး ကင်းလွတ်ခွင့်နဲ့ အမေရိကမှာရှိတဲ့ တက္ကသိုလ်တစ်ခုမှာ Semester တစ်ခုအတွက် သွားလေ့လာနိုင်မယ့် အခွင့်အရေးကို ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
*** August 1, 2021 တွင် အသက် (၁၈) နှစ်ပြည့်ထားသူ ဖြစ်ရပါမယ်။
*** အင်္ဂလိပ်စာအရေးအပြော ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ရပါမယ်။
*** မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘွဲ့ကြိုအတွက် တက္ကသိုလ်တက်နေတဲ့သူ ဖြစ်ရပါမယ်။
*** January 2022 တွင်အမေရိကမှာ ကျောင်းသွားတက်နိုင်တဲ့သူ ဖြစ်ရပါမယ်။
*** Personal Letter of Recommendation (Letter of Recommendation အတွက် သူတို့ Website က သတ်မှတ်ထားတဲ့ Form ကို Download လုပ်ပြီး ဖြည့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်)
*** Passport (သို့) မှတ်ပုံတင်
*** STEP 1 : အောက်က Link ထဲဝင်ပြီး Sign Up လုပ်ပြီး Acc လုပ်ပါ။ >>> https://bit.ly/395hFkt <<<
*** STEP2: အက်ဆေး(၂) ပုဒ်ရေးပါ။
*** အက်ဆေးမေးခွန်းက (၃) ခုရှိပါတယ်။
Essay 1 ကို မဖြစ်မနေ ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Essay2&3ကတော့ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ တစ်ပုဒ်ရွေးပြီးရေးလို့ရပါတယ်။
STEP3: အက်ဆေးတွေရေးပြီးသွားရင် အက်ဆေးရယ် လိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေနဲ့အတူ ကိုယ့်ရဲ့ Account မှာ လိုအပ်တာတွေဖြည့်ပြီး တင်လိုက်ရုံပါပဲ။ အဲ့ဒါပြီးရင် ပြီးပါပြီ။
*** Recommendation Letter ကလေ Website အရဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ Account မှာပဲ တင်ဖို့ ပြောထားတယ်။ U.S. Embassy Rangoon ရဲ့ FB Post မှာတော့
*** Recommendation Letter ကို Email နဲ့ Embassy ကိုပို့ဖို့ ပြောထားတာတွေ့ရတယ်။ အဲ့တော့ Recommendation Letter ကို Email နဲ့ရော Account မှာရော နှစ်ခုလုံး တင်နိုင်ရင် ပိုစိတ်ချရလောက်တယ်)
*** US က Semester တစ်ခုစာ သွားတက်ရမှာဆိုတော့ ၄-၆ လ ကြာနိုင်ပါတယ်။
*** Global_UGRADနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်ကိုဘယ်မှာဖတ်လို့ရလဲ အောက်က Link ထဲဝင်ပြီး Check လို့ရပါတယ်။ >>> https://bit.ly/2LKVac3 <<<